कपिल शर्मालाई इन्टरनेटमा खोज्नुहुन्छ? साइबर... :: विद्या राजपुत :: Setopati
कपिल शर्मालाई इन्टरनेटमा खोज्नुहुन्छ? साइबर अपराधीको जालमा पर्नुहोला!
एजेन्सी, असोज २५
भारतीय कमेडियन कपिल शर्मा आफ्नो फरक कलाशैलीले प्रख्यात छन्। उनको हँसिलो अनुहार र हसाउँन सक्ने कलाले उनको फ्यान विश्वभरी बढ्दो छ। 'द कपिल शर्मा शो' बाट त उनी झन् निकै दर्शकको प्यारो भएका छन्। उनको बारेमा जान्न र बुझ्न हरेक दर्शकले खोजीरहेका हुन्छन्। इन्टरनेटको जमानामा आफुलाई मनपर्ने सेलब्रेटीको बारेमा खोज्न निकै सजिलो भएको छ।
भारतका कमेडियन कपिल शर्मा इन्टरनेटमा सबैभन्दा बढी खोजिने व्यक्ति बनेका छन्। भारतको सुरक्षा सम्बन्धी सफ्ट्वेयर बनाउने कम्पनी मैकफीले मंगलबार चुट्किला र कमेडीबाट भरपुर मनोरञ्जन दिने कपिल इन्टरनेटमा यस वर्षको शिर्ष स्थानमा परेको जनाएको छ।
कम्पनीले यसवर्ष सबैभन्दा बढी चर्चामा रहने हस्तीको सूचीमा कपिल परेपनि साइबर अपराध ठगी गर्ने वेवसाइटहरुले मानिसहरुलाई आर्कषित गर्न उनको नाम प्रयोग गर्ने जनाएको छ।
मैकफीले वार्षीक सूचीमा शीर्षमा भारतीय कमेडियन कपिल शर्मा र त्यसपछिट सलमान खान दोस्रो नम्बरमा र आमिर खान तेस्रो नम्बरमा रहेको जनाएको छ।
मैकफीले जनाएअनुसार साइबर अपराधीहरुले सोझा इन्टरनेटप्रयोगकर्तालाई झुठो वेवसाइटमा आकर्षित गर्न सेलिब्रेटी संस्कृतिको प्रयोग गर्ने गरेको छ।
यस्ता वेवसाइटको प्रयोग भाइरस हाल्न तथा सोझा प्रयोगकर्ताको निजी सुचना चोर्न गर्ने गरेका छन्। मैकफीले आफ्नो ११ औं रिर्पोटमा पाएअनुसार इन्टरनेटमा कपिल शर्मालाई खोज्दै जाने प्रयोगकर्ताहरु झुठो वेवसाइटको पञ्जामा पर्ने ९.५८ प्रतिशत रहन्छ।
यसैगरि सलमान खान र आमिर खानलाई खोज्दै झुठो बेवसाईटमा पुग्ने सम्भावना क्रमश ९.०३ र ८.८९ प्रतिशत छ। सूचीमा प्रियंका चोपडा, अनुष्का शर्मा, सन्नी लियोनी, कंगना रनावत, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर र टाइगर श्राफ जस्ता अरु नाम पनि छन्।
मैकफीका आरएंड डी सञ्चालकका प्रमुख वेंकट कृष्णपुरले भने,‘ आज डिजिटल विस्तारमा हस्तिहरु र उनको प्रसंसकबीचको दुरी घटेको छ। भारतीयहरुमा आफ्नो मनपर्ने हस्तको बारेमा धेरै जान्ने इच्छा बढ्दै गएको छ। जसको लागि पहिल्यैदेखि उपयोगयोग्य सामाग्री उपलब्ध छ।’
उनका अनुसार साइबर अपराधी मानिसको यो रुचीको फाइदा उठाइरहेका छन् र जब मानिसहरु आफ्नो सुविधाको लागि सुरक्षासँग सम्झौता गर्छन् तब उनीहरुलाई साइबर अपराधीहरु आफ्नो सिकार बनाउँछन्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज २५, २०७४, ०२:४१:०३